Esdrasa 2 - Ny Baiboly
Esdrasa toko 2
Isan'Israely niara-niverina tamin'i Zorobabela ho any amin'ny tanin'i Jodà.
1Ireto ny olona ambanivohitra niverina avy amin'izay nanaovana sesi-tany azy, dia izay nentin'i Nabokodonozora, mpanjakan'i Babilona ho any Babilona, ka niverina ho any Jerosalema sy Jodà, samy ho any an-tanànany avy; 2dia niverina niaraka tamin'i Zorobabela, Josoe, Nehemia, Saraiasa, Rahelaiasa, Mardokea, Belsana, Mesfara, Begoai, Rehoma, Baana.
Izao no isan'ny ankapobem-bahoaka tamin'Israely: 3Roa amby fitopolo amby zato sy roa arivo, ny taranak'i Farosa; 4rao amby fitopolo sy telon-jato ny taranak'i Safatiasa; 5dimy amby fitopolo sy fiton-jato ny taranak'i Area; 6roa ambin'ny folo sy valon-jato sy roa arivo ny taranak'i Fahata-Moaba, avy amin'ny zanak'i Josoe sy Joaba; 7efatra amby dimampolo sy roan-jato amby arivo ny taranak'i Elama; 8dimy amby efapolo sy sivin-jato ny taranak'i Zetoà; 9enimpolo sy fiton-jato ny taranak'i Zakai; 10roa amby efapolo sy enin-jato ny taranak'i Banì; 11telo amby roapolo sy enin-jato ny taranak'i Belaì; 12roa amby roapolo sy roan-jato sy arivo ny taranak'i Azagada; 13enina amby enimpolo sy enin-jato ny taranak'i Adonikama; 14enina amby dimampolo sy roa arivo ny taranak'i Begoaì; 15efatra amby dimampolo sy efa-jato ny taranak'i Adìna; 16valo amby sivifolo ny taranak'i Atera, avy amin'ny terak'i Ezekiasa; 17telo amby roapolo sy telon-jato ny taranak'i Besaì; 18roa ambin'ny folo amby zato ny taranak'i Jorà; 19telo amby roapolo sy roan-jato ny taranak'i Hasoma; 20dimy amby sivy folo ny taranak'i Gebara; 21telo amby roapolo amby zato ny taranak'i Betleema; 22enina amby dimampolo ny mponina tao Netofà; 23valo amby roapolo amby zato, ny mponina tao Anatota; 24roa amby efapolo ny taranak'i Azmaveta; 25telo amby efapolo sy fiton-jato ny zanak'i Kariatiarima sy Kefirà ary Berota; 26iraika amby roapolo sy enin-jato ny zanak'i Ramà sy Gabaà; 27roa amby roapolo amby zato ny mponina tao Makmasa; 28telo amby roapolo sy roan-jato ny mponina tao Betela sy Haì; 29roa amby dimampolo ny taranak'i Nebao; 30enina amby dimampolo amby zato ny taranak'i Megbisa; 31efatra amby dimampolo sy roan-jato sy arivo ny taranak'ilay Elama anankiray; 32roapolo sy telon-jato ny taranak'i Harima; 33dimy amby roapolo sy fiton-jato, ny taranak'i Loda sy Hadida ary Honao; 34dimy amby efapolo sy telon-jato ny taranak'i Jerikao; 35telopolo sy enin-jato sy telo arivo ny taranak'i Senaà.
36Mpisorona: Telo amby fitopolo amby sivin-jato ny taranak'Isaiasa tamin'ny fianakavian'i Josoe; 37roa amby dimampolo sy arivo ny taranak'i Emera; 38fito amby efapolo sy roan-jato amby arivo ny taranak'i Fasara; 39fito ambin'ny folo sy arivo ny taranak'i Harima.
40Levita: efatra amby fitopolo ny taranak'i Josoe sy Kedmiela, avy amin'ny taranak'i Odoiasa. 41Mpihira: valo amby roapolo amby zato ny taranak'i Asafa. 42Taranaky ny mpiandry varavarana: sivy amby telopolo amby zato no tontalin'ny taranak'i Seloma, ny taranak'i Atera, ny taranak'i Telmona, ny taranak'i Akoba, ny taranak'i Hatita, ny taranak'i Sobaì.
43Natineana: ny taranak'i Sihà, ny taranak'i Hasofà, ny taranak'i Tabaota, 44ny taranak'i Kerosa, ny taranak'i Siaà, ny taranak'i Fadona, 45ny taranak'i Lebanà, ny taranak'i Hagabà, 46ny taranak'i Akoba, ny taranak'i Hagaba, ny taranak'i Selmaì, 47ny taranak'i Hanàna, ny taranak'i Gadela, ny taranak'i Gahera, ny taranak'i Raaià, 48ny taranak'i Rasina, ny taranak'i Nekodà, ny taranak'i Gazama, 49ny taranak'i Azà, ny taranak'i Faseà, ny taranak'i Besea, 50ny taranak'i Azenà, ny taranak'i Monima, ny taranak'i Nefosima, 51ny taranak'i Bakboka, ny taranak'i Hakofà, 52ny taranak'i Harhora, ny taranak'i Beslota, ny taranak'i Mahidà, ny taranak'i Harsà, 53ny taranak'i Berkosa, ny taranak'i Sisarà, ny taranak'i Temà, 54ny taranak'i Nasià, ny taranak'i Hatifà.
55Taranaky ny mpanompon'i Salomona: ny taranak'i Sotaì, ny taranak'i Sofereta, ny taranak'i Farodà, 56ny taranak'i Jalà, ny taranak'i Derkona, ny taranak'i Gedela; 57ny taranak'i Safatià, ny taranak'i Hatila, ny taranak'i Fokoreta-Asebaima, ny taranak'i Ami. 58Roa amby sivifolo sy telon-jato no tontalin'ny Natineana sy ny mpanompon'i Salomona.
59Izao no nandeha avy tany Tel-Melà, Tel-Harsà, Keroba, Adona, Emera, ka tsy nahalaza ny fianakavian-drainy amam-pirazanany, hanamarina ny maha-Israely azy: 60ny taranak'i Dalaiasa, ny taranak'i Tobia, ny taranak'i Nekodà: roa amby dimampolo sy enin-jato. 61Ary ny tamin'ny taranaky ny mpisorona: dia ny taranak'i Hobià, ny taranak'i Akosa, ny taranak'i Berzelaì, izay naka vady tamin'ny zanakavavin'i Berzelaì, Galaadita, ka dia nantsoina amin'ny anarany. 62Nikaroka ny taratasy vavolombelon'ny firazanana izy ireo, fa tsy nahita, ka dia nolazaina ho tsy madio tsy mahatana ny fisoronana; 63ary noraran'ny governora tsy hihinana ny zavatra masina indrindra izy ireo, mandra-pitsangan'izay mpisorona, hanontany amin'Andriamanitra amin'ny Orima sy ny Tomima.
64Enimpolo sy telon-jato amby roa arivo sy efatra alina no tontalin'ny fiangonana rehetra, 65afa-tsy ny mpanompony, lahy amana vavy, izay nisy fito amby telopolo sy telon-jato amby fito arivo. Nisy mpihira, lahy amana vavy, roan-jato, tamin'izy ireo. 66Ary izao no nananany: soavaly enina amby telopolo sy fiton-jato, mole dimy amby efapolo sy roan-jato, 67rameva dimy amby telopolo sy efa-jato, ary ampondra roapolo sy fiton-jato amby enina arivo.
68Nony vao tonga tao amin'ny tranon'ny Tompo, tany Jerosalema, dia maro tamin'ny loham-pianakaviana no nanome fanatitra an-tsitra-po ho an'ny tranon'Andriamanitra, mba hananganana azy eo amin'ilay nitoerany indray. 69Ny nomeny hatao amin'ny rakitra momba izany asa izany, samy araka ny toe-pananany avy, dia darika volamena arivo sy enina alina, mina volafotsy dimy arivo, ary akanjom-pisoronana zato.
70Toy izany no nahatafapetraka azy tamin'ny tanànany avy, dia ny mpisorona sy ny levita, ny sarambabem-bahoaka, ny mpihira, ny mpiandry varavarana, sy ny Natineana, ary nonina tamin'ny tanànany avy Israely rehetra. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.0345 seconds